Sahabo ho tamin’ny 9 ora alina, nisy dahalo 5 lahy nanafika tao amin’ny fokontany Ambararata , kaominina Manja. Lasan’ireo dahalo tamin’izany ny osy 50 tamin’ity tanàna ity. Nampandre ny polisin’ny distrikan’i Manja ny fokonolona. Raikitra avy hatrany ny fanenjehana ireto olon-dratsy izay narahin’ny fokonolona sy ny polisy. Tafaverina ny osy sasany ary nisy ireo efa novonoin’ireo dahalo. Nandritra ny fifanjevoana no nahatrarana an’i Vaika. Nahazo vahana idray tato ho ato, indrindra hatramin’ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra ny fanafihan-dahalo. Variana any amin’ny raharaham-pirenena ny tompon’andraikitra ka zary manao ny danin’ny kibony ireo malaso. Ahiana ho sarotra ny hanavahana dahalo manao fanamiana mpitandro ny filaminana eny ambony angidimby.